Fomba fiasan’ny minisitra Tinoka Roberto Milaza ny heviny ny tontolon’ny spaoro Malagasy
Andriamahitsinoro Carolus Mpampidi-baolina be indrindra any Arabie Saoudite D-2
Tapitra tamin’ny alarobia 15 mey 2019 alina teo ny fifaninanana baolina kitra sokajy diviziona faharoa any Arabie Saoudite na ny « Prince Mohammed League » izay hilalaovan’ilay lohalaharana Malagasy " Carolus ".
Fiverenan’i Dax ao amin’ny Barea Naneho ny hafaliany ny mpanazatra Dupuis
Ny 10 jona izao no hampahafantarana amin’ny fomba ofisialy ireo 23 mirahalahy handrafitra farany ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra na ny Barea ho any Egypta hiatrika ny CAN 2019.
Baolina kitra vehivavy DEFF3 Ny andro faha-6 rahampitso no hamaritra izay ho tompondaka
Ny andro faha-6 farany hotontosaina eny amin’ny kianjan’i Carion rahampitso sabotsy 18 mey 2019 no hamaritra sy hahafantarana izay
Saika nitovitovy hatrany ny valim-panontaniana nomen’ireo izay nanontaniana ny mikasika ny fahitan’izy ireo ny minisitry ny fanatanjahantena Malagasy,
Tinoka Roberto sy ny fomba fiasany izay nilaza fa tanora mihetsiketsika izy ary vonona hanao zavatra hampandrosoana an’ity sehatra ity.
Solofo Barijaona Andrianavomanana : Tanora ary mihetsiketsika fatratra ny minisitra Tinoka Roberto ka mahavelombolo ny hampandrosoany ny spaoro Malagasy.
Norolalao Andriamahazo filohan’ny federasion’ny atletisma Malagasy ; Tsy mbola ampy hitsarana azy ny fotoana nitantanan’ny minisitra an’ity fanatanjahantena Malagasy ity. Izy aloha hatreto dia manatona ifotony an’ireo federasiona sy ireo mpilalao manao fifaninanana ka ho azo antoka ny ho fandrosoan’ny spaoro Malgasy.
Randriamandimby Harinirina Jimmy Désiré tompon’andraikitry ny serasera ao amin’ny FMBB Malagasy ; Mbola vao manomboka miasa ity minisitra ity ka tsy azo tsaraina amin’ny nataony fa ny hita aloha hatreto dia mazoto manotrona ny mpanao spaoro Malagasy izy ary hita vonona hanatanteraka ny vina napetraky ny filoham-pirenena ankehitriny eo amin’ity sehatra ity.